ဘရိုင်ယန်သည်ဒါဝိဒ် Mitchell နှင့်ဧလိရှဗက်စမတ်၏ပုံပြင်
ဘရိုင်ယန်သည်ဒါဝိဒ် Mitchell ကခိုကိုးရာမဲ့အစေခံနှင့်၎င်း၏အခြေခံတန်ဖိုးများကို restore ပြန်အားဖြင့် Mormonism ဘုရားကျောင်းပြင်ပေးဖို့ကမ္ဘာမြေသို့ပေးပို့ခဲ့တဲ့ကောင်းကင်ကနေ Self-ကွှေးကျွောကောငျးကငျတမနျဖြစ်ပါတယ်။ သူထို့နောက် 14 နှစ်အရွယ်အယ်လီဇဘတ်စမတ်ပြန်ပေးဆွဲကိုးလကြာသူမ၏သုံ့ပန်းကိုင်ပြီး၏အပြစ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသူသည်သူ၏ဇနီး Wanda Barzee, အတူလည်းရှိ၏။
ဘရိုင်ယန်သည်ဒါဝိဒ် Mitchell က၌, အောက်တိုဘာလ 18, 1953 ရက်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည် Salt Lake City, Utah ။
သူ Mormonism မိဘများအိမ်တွင်မွေးဖွားကလေးခြောက်ယောက်, အိုင်ရင်းနှင့် Shirl Mitchell က၏တတိယဖြစ်ခဲ့သည်။ အိုင်ရင်းတစ်ကျောင်းဆရာနှင့် Shirl တစ်လူမှုရေးလုပ်သား, သက်သတ်လွတ်စားခဲ့ကြပြီးမြေတပြင်လုံးဂျုံမုန့်ကိုပုံမှန်အစားအသောက်နှင့်ပေါင်းဟင်းသီးဟင်းရွက်များအပေါ်၎င်းတို့၏ကလေးများကြီးပြင်း။ အဆိုပါမိသားစုထူးဆန်းပေမယ့်လျောက်ပတ်သောလူအဖြစ်အိမ်နီးချင်းဖော်ပြထားခဲ့သည်။
ဘရိုင်ယန် Mitchell ကပြိုကင်းထောက်နှင့် Little ကလိဂ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့သာမန်ကလေးကနဲ့တူသလိုပဲ။ အိုင်ရင်းတစ်ဦးဂရုစိုက်တတ်တဲ့မိခင်ခဲ့ပေမယ့် Shirl မိမိဝန်ခံချက်အသုံးပြုပုံကျန်းမာကလေးကမွေးမြူအပေါ်တစ်ဦးမေးခွန်းထုတ်စရာရှုထောင့်ခဲ့ရသည်။ ဘရိုင်ယန်ရှစ်တုန်းက Shirl သူ့ကိုဆေးပညာဆိုင်ရာဂျာနယ်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဓာတ်ပုံများကိုဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အသုံးပြုပုံ sex အကြောင်းသူ့ကိုသင်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ သည်အခြားလိင် oriented စာအုပ်တွေကိုအိမ်သို့ယူဆောင်နှင့်သူ၏လက်ပေါ်မှာအခမဲ့အချိန်အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်သူ latchkey ဆိ၏လက်လှမ်းမမီအတွင်းထွက်ခွာခဲ့ကြသည်။
Shirl တစ်ချိန်ကအိမ်မှာကသူ့လမ်းကိုရှာဖွေသူ့ကိုညွှန်ကြားချက်, မြို့တစ်ခုကျွမ်းတဝင်မရှိသောဧရိယာထဲမှာ 12 နှစ်အရွယ်မစ္စတာမစ်ချဲလ်ကိုချွတ်ကျဆင်းနေခြင်းဖြင့်မိမိသားကိုအသက်တာ၌အနည်းငယ်သင်ခန်းစာတွေသင်ပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။
ဘရိုင်ယန်အဟောင်းတွေတယ်သောသူကဲ့သို့ဖြစ်သောသူ့မိဘနှင့်အတူပိုပြီးဆငျခွေပါသောဖြစ်လာပြီးမှစတင်ခဲ့ အထီးကျန်တဲ့ဤလောကသို့ဆုတ်ခွာ ။ သူဟာလျင်မြန်စွာမိသားစုများ၏အနက်ရောင်သိုးဖြစ်လာခဲ့သည်။
အသက် 16 နှစ်အရွယ်မှာပတ်လည်ဘရိုင်ယန်ကလေးတစ်ဦးမှမိမိကိုမိမိဖော်ထုတ်၏အပြစ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်နှင့်လူငယ်ဆိုးသွမ်း '' ခန်းမမှစေလွှတ်ခဲ့သည်။
မိမိအရာဇဝတ်မှုတွဲအဆိုပါအမည်းစက်ကသူ့ရွယ်တူချင်းအကြားဘရိုင်ယန်ကှာ။ ဘရိုင်ယန်နှင့်သူ၏မိခင်အကြားအငြင်းပွားမှုများအဆက်မပြတ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်သည်သူ၏အဖွားနှင့်အတူအသက်ရှင်ဖို့ဘရိုင်ယန်ကိုပို့ခဲ့ပါတယ်။ မကွာပြောင်းရွှေ့ပြီးနောက်, ဘရိုင်ယန်ကျောင်းမှထွက်ခဲ့ပါတယ်နှင့်ပုံမှန်မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်ကိုအသုံးပြုပြီးစတင်ခဲ့သည်။
ဘရိုင်ယန် 19 မှာ Utah left နှင့်မကြာမီသူမသည်ကိုယ်ဝန်ရှိခဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက် 16 နှစ်အရွယ်ကရင်မိုင်းနားလက်ထပ်ခဲ့သည်။ သား, Travis နှင့်သမီး, Angela: သူတို့ဟာအတူတူတည်းခိုသောနှစ်နှစ်အတွင်းကလေးနှစ်ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့မုန်တိုင်းထန်ကြားဆက်ဆံရေးအဆုံးသတ်နှင့်မစ်ချယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကရင်ရဲ့စွပ်စွဲဖောက်ပြန်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုများ၏သားသမီးများ၏ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားရရှိခဲ့သည်။ ကရင်နောက်အိမ်ထောင်ပြုလိုက်တဲ့အခါသူမသားသမီးများ၏ဥပဒေရေးရာချုပ်နှောင်ထားပြန်ပေမယ့်မစ္စတာမစ်ချဲလ်ဟာသူတို့ရဲ့မိခင်မှပြန်လာသောမှသူတို့ကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့က New Hampshire ပြည်နယ်မှသူတို့နှင့်အတူချွတ်။
မစ်ချယ်ကသူ၏အက်ဥပဒေ Up ကိုရှငျး
သူ့အစ်ကိုတစ်ဦးဘာသာရေးမစ်ရှင်မှပြန်လာသောထိုသူနှစ်ယောက်စကားပြောစတင်ပြီးနောက် 1980 ခုနှစ်တွင်မစ်ချယ်ရဲ့ဘဝပြောင်းလဲသွားတယ်။ ဘရိုင်ယန်ကသူ့မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်အသုံးပြုမှုရပ်စဲခြင်းနှင့်အဆုံးစွန်သောနေ့သူတော်စင်အသင်းတော်၌တက်ကြွစွာဖြစ်လာခဲ့သည်။ 1981 by သူတစ်ဦးသည်ယခင်အိမ်ထောင်မင်္ဂလာမှသည်သမီးသုံးယောက်ရှိခဲ့သူကိုသူ၏ဒုတိယဇနီး, ဒက်ဘီ Mitchell ကမှလက်ထပ်ခဲ့သည်။ ဒက်ဘီရဲ့ကလေးသုံးယောက်နှင့်ဘရိုင်ယန်ရဲ့ကလေးနှစ်ယောက်နှင့်တကွ, Mitchell မိမိတို့လက်ကိုအပြည့်အဝရှိခဲ့ပေမယ့်မကြာမီ၎င်းတို့၏လက်ထပ်ပြီးနောက်နှစ်ခုထက်ပိုသောကလေးများရှိခြင်းကနေစုံတွဲကိုရပ်တန့်ဘဲနေ၏။
သူ့ဒုတိယအအိမ်ထောင်ရေးအတွက် Mitchell ကရဲ့အလွဲသုံးမှု
အိမ်ထောင်ရေးမျိုး၏အရိပ်လက္ခဏာကိုပြသရန်အဘို့အဒါဟာတာရှည်မယူခဲ့ပါဘူး။ ဘရိုင်ယန်ရဲ့ကလေးနှစ်ယောက်နေအိမ်များပေးရန်စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ဒက်ဘီ Mitchell ကထိန်းချုပ်ထားခြင်းနှင့်ကြမ်းတမ်းသူမကဝတ်ဆင်စားနိုင်သောအရာကိုအဆုံးအဖြတ်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသူမ၏ထိတ်လန့်ဖို့ကြိုးစားနေဖို့နူးညံ့သိမ်မွေ့လွှဲကြောင်းပြောဆိုထားသည်။ မစ်ချယ်ကသူသည်သူ၏ရန်သူအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူခဲ့သည်အခိုင်အမာပေမယ့်ကိုစာတနျ၌သူ၏အကျိုးစီးပွား, သူမ၏နှောင့်အယှက်။ Mitchell ကဒက်ဘီကသူ့ကလေးတွေကိုအကြမ်းဖက်ခြင်းနှင့်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ခဲ့သူမကသူ့ကိုဆန့်ကျင်ကသူတို့ကိုလှည့်ခဲ့ကြောက်ရွံဟုဆိုကာ 1984 ခုနှစ်တွင်ကွာရှင်းမှုအတွက်တရားစွဲဆို။
သူတို့ရဲ့ခွဲခြာ၏တစ်နှစ်အတွင်းဒက်ဘီ Mitchell ကလိင်ကသူတို့ရဲ့သုံးခုနှစ်အရွယ်သားစော်ကားကြစေခြင်းငှါသူမ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများအစီရင်ခံရန်အာဏာပိုင်များကိုခေါ်။ ကလေးနှင့်မိသားစုန်ဆောင်မှုများ၏ဌာနခွဲများအတွက်တစ်ဦးကအမှုတွဲကိုင်တိုက်ရိုက်မှ Mitchell ကလင့်ထားသည်နိုင်ဘူး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု ပေမယ့်ကောင်လေးနှင့်မစ်ချယ်နှင့်အတူအနာဂတ်လည်ပတ်မှုကြီးကြပ်စေခြင်းအကြံပြုခဲ့သည်။
ယခုနှစ်အတွင်း, ဒက်ဘီရဲ့သမီးလိင်လေးနှစ်သူမ၏အလွဲသုံးစားလုပ်၏ Mitchell ကစွပ်စွဲတယ်။ ဒက်ဘီအတွက် LDS ခေါင်းဆောင်များဖို့အလွဲသုံးစားလုပ်သည်ဟုပြောဆိုမှုများရှိသော်လည်းထိုသို့ drop ရန်အကြံပြုခဲ့သည်။
မစ်ချယ်နှင့် Barzee လက်ထပ်ခြင်း
မစ်ချယ်နှင့်ဒက်ဘီကွာရှင်းသောထိုနေ့တွင်, Mitchell က Wanda Barzee လက်ထပ်ခဲ့သည်။ Barzee သူမအိမ်ထောင်ရေးကျန်ရစ်သည့်အခါသူမကသူမ၏ခင်ပွန်းဟောင်းနှင့်အတူကျန်ရစ်တော်မူသောကလေးခြောက်ယောက်နဲ့ 40 နှစ်အရွယ်ကွာရှင်းခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကသူ့ကိုထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်တွေ့ရှိသော်လည်း Barzee ရဲ့မိသားစု, 32 နှစ်အရွယ်မစ္စတာမစ်ချဲလ်၏လက်ခံခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးပြီးနောက် Barzee ရဲ့သားသမီးများ၏အနည်းငယ်သည့်ကြင်စဦးဇနီးမောင်နှံနှင့်အတူအတွက်ပြောင်းရွေ့ပေမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မစ်ချယ်ရဲ့စားပြီးအမူအကျင့်များ ပို. ပို. ထူးဆန်းနှင့်ခြိမ်းခြောက်ဖြစ်ဖို့သူတို့ရဲ့အသစ်ကအိမ်ကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
အပြင်လူသာမန် Hard-အလုပ်လုပ် Mormonism အဖြစ်စုံတွဲရှုမြင်ကြသည်။ Mitchell ကတစ်ဦးသေဆုံးရှုးအဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးတက်ကြွစွာ LDS ရှိသောအသင်းတော်နှင့်တကွပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ပေမယ့်အနီးကပ်မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများကိုမကြာခဏ Barzee အပေါ်လွှတ်ဒေါသမျက်နှာသို့သဘောထားကိုသတိပြုမိခဲ့ကြသည်။ သူကသူ့ဘာသာရေးအမြင်များနှင့်သူချင်း LDS အဖွဲ့ဝင်များနဲ့သူ့ရဲ့အပြန်အလှန်နှစ်ဦးစလုံးပိုမိုလွန်ကဲဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဗိမာနျတျောထုံးတမ်းစဉ်ကာလအတွင်းစာတန်၏တောင်မှသည်သူ၏သရုပ်ဖော်သူကဆင်း Tone မှအကွီးအကဲမြားအားဖြင့်မေးမွနျးခဲ့သညျရှိရာအမှတ်လွန်းအစွန်းရောက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
တဦးတည်းညဉ့် Mitchell Barzee ရဲ့သားတဦးနိုးနှင့်သူတို့ပဲကောင်းကင်တမန်ပြောပြီသူ့ကိုသို့ပြောသည်။ အဆိုပါ Mitchell ကအိမ်မှာကွာပြောင်းရွှေ့ခြင်း, စဉ်ဆက်မပြတ်ဘာသာသှငျးယူနိုင်ခြင်း, Barzee ရဲ့ကလေးများဒါကြောင့်ဤမျှလောက်သောပြီးနောက်အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲပစ်ရန်စတင်ခဲ့သည်။ 1990 အသုံးပြုပုံ Mitchell ကခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းနဲ့သူ့ရဲ့အသင်းအဖွဲ့ရပ်စဲ, Emmanuel မှသူ၏နာမကိုပြောင်းလဲနှင့်သူ၏ယုံကြည်ချက်သည်သူ၏ပရောဖက်ပြုရူပါရုံအားဖြင့်အထဲကခြစ်ရာမပေါ်ခဲ့ကြသညျဘုရားသခငျ၏ပရောဖကျအဖွစျအခြားသူများမိမိကိုယျကိုပေးအပ်သည်။
Emmanuel နှင့်ဇနီးသညျဘုရားသခငျ Adorneth
စုံတွဲ Salt Lake City, မှပြန်လာသောအခါ, Mitchell ကမိမိအအဖြူရောင်အင်္ကျီအတွက်ရှည်လျားသောမုတ်ဆိတ်နှင့်ဝတ်အတူယေရှုနဲ့တူကြည့်အပေါ်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ Barzee ယခု "ဘုရားသခ Adorneth" ဟုအရူးဖြစ်ကြတပည့်ကဲ့သို့သူ၏အနားမှာ နေ. , ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်မြို့တွင်းလမ်းများတလျှောက်တွင်ပုံမှန်လ်တာသူ့ကိုယ်သူတောင်းဆို။ ထိုစုံတွဲ၏မိသားစုများသူတို့နှင့်အတူလုပ်ဖို့နည်းနည်းရှိခဲ့တယ်, သူတို့အပျေါမှာဖြစ်ပျက်တဲ့သူအဟောင်းမိတ်ဆွေများကိုတစ်ခုတိုးချဲ့လက်နှုတ်ခွန်းနှင့် panhandlers နှင့်အတူသူစိမ်းအဖြစ်ကုသခံခဲ့ရသည်။
သူမ၏ကိုးနှစ်အရွယ်ညီမမာရိကက်သရင်း, ထိုပြန်ပေးဆွဲမျက်မြင်အဖြစ်ဇွန်လ 5, 2002 ၏အစောပိုင်းနံနက်မှာတော့ဘရိုင်ယန်သည်ဒါဝိဒ် Mitchell ကသူမ၏အိပ်ခန်းထဲမှာထို့နောက် 14 နှစ်အရွယ်အယ်လီဇဘတ်စမတ်ပြန်ပေးဆွဲခံရ။ ပြန်ပေးဆွဲပြီးနောက်စမတ်၏မိသားစုရုပ်မြင်သံကြားပေါ် သွား. ဧလိရှဗက်ကိုရှာဖွေ 2,000 ရှာဖွေရေးစေတနာ့ဝန်ထမ်းစုဆောင်းရန် Center က Recover သည့်လော်ရာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပေမယ့်သူမ၏နေရာချထားနိုင်ခြင်းရှိကြ၏။ လအနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်အောက်တိုဘာလအတွက်, အဲလစ်ဇဘက်ရဲ့ညီမနာမည်တစ်ခု Mitchell ကသူ့ကိုယ်သူခေါ်ဆိုစတင်ခဲ့ "Emmanuel" အဖြစ်မစ္စတာမစ်ချဲလ်ရဲ့အသံကိုအသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။ သူကလက်ရာလုပ်နေတာဟာစမတ်မိသားစုအတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးပေမယ့်ရဲကသူ့ကိုခိုင်လုံသောခဲဖြစ်မတှေ့ခဲ့ပေ။ ထို့ကြောင့်စမတ်မိသားစုသူ၏မျက်နှာကိုဆွဲရန်ပုံကြမ်းအနုပညာရှင်အသုံးပြုသွားမည်နှင့် "လယ်ရီဘုရင်ကတိုက်ရိုက်" နှင့်အခြားမီဒီယာအရင်းအမြစ်များအပေါ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဤသည်နောက်ဆုံးတွင်မတ်လ 12, 2003 ရက်တွင်ကိုးလအကြာတွင်ဧလိရှဗက်နှင့် Wanda နှင့်အတူတွေ့ရှိရလျက်ရှိ Mitchell ကမှဦးဆောင်။
နှစ်ပေါင်းများစွာအတော်ကြာစမ်းသပ်မှုတွေပြီးနောက်မစ္စတာမစ်ချဲလ်ရဲ့စိတ္တဇကာကွယ်ရေးဒီဇင်ဘာလ 11 ရက်နေ့တွင်ဖကျြဆီးခံခဲ့ရ, 2010 အဲလစ်ဇဘက်သူမအကြိမ်ကြိမ်အဓမ္မပြုကျင့်ခြင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ကိုကြည့်နှင့်သူမ၏ပြန်ပေးဆွဲကာလအတွင်းအရက်လောင်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့တရားရုံးတွင် shared ။
အဆိုပါဂျူရီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွင်းသူမ၏ပါဝငျ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုနှင့်အတူပြန်ပေးဆွဲဧလိရှဗက်စမတ်၏ Mitchell ကအပြစ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းနှင့် Barzee ယခုနှစ် 2024 သည်အထိသူမ၏ထောင်ဒဏ်အစေခံရန်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရစဉ်အရီဇိုးနားအတွက်ထောင်ထဲမှာဘဝထောင်ဒဏ်ခဲ့သည်။
သူတို့၏ကလေးများ Kill အဘယ်သူသည်မိခင်များ
အဆိုပါ Osage အဘိဓါန်တောင်ကုန်းများတွင်လူသတ်မှုနှင့် Mayhem
Notorious အမျိုးသားရာဇဝတ်သားများ၏ profiles
ဒန်းနစ် Rader ၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို - အ BTK Strangler
ထိပ်တန်း 10 Aaliyah သီချင်းများ
ကလေးတွေကအဘို့ထိပ်တန်း5Wakeboarding
Dolch အမြင့်ကြိမ်နှုန်း Cloze လှုပ်ရှားမှုများ
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်: Leyte ပင်လယ်ကွေ့၏တိုက်ပွဲ
Dogger ဘဏ်များ၏တိုက်ပွဲ - ပထမကမ္ဘာစစ်
တစ်သညျဘုရားသခငျ / နတ်ဘုရားကုသမှုထုံးတမ်း Hold လုပ်နည်း
ဆေးပြင်းလိပ်လျှော့ချ & ရှုးအမျိုးအစားများ
ထိပ်တန်း 40 မရှိမဖြစ်ပေါ့ပ်သီချင်းများ
ပြင်သစ်တွင် "Entrer" (Enter) ကို Conjugate လုပ်နည်း
အတိတျ 10 နှစ်၏အကောင်းဆုံးတီဗီဒရာမာစီးရီး
တစ်ဦး Reiki အလေ့အကျင့်ကိုတက်စတင်ခြင်း7သိကောင်းစရာများ
အမေရိကန်စနစ် (စီးပွားရေးအကြံပြုချက်များဟင်နရီရွှံ့စေးခြင်းဖြင့် advanced)
Classical စန္ဒယားဂီတ Styles
အမေရိကန်မူလစာမျက်နှာ Styles အပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု, 1600 ယနေ့တွင်မှ